VPN yekukanganisa kodhi 720 inotaura kuti Kubatana nekombuta iri kure hakugone kumisikidzwa. Ungangoda kuti uchinje maratidziro enetiweki yekubatanidza iyi. Unogona kugadzirisa iyi nyaya pane yako Windows 10 PC uye simbisa yakabudirira VPN kubatana uchishandisa iyo 7 mhinduro dzakachengeteka dzatatsanangura mune ino chinyorwa. Tarisa uone akajairika VPN makodhi ekukanganisa uye mhinduro dzadzo. Join… [Verenga zvakawanda ...] nezve FIX: VPN kukanganisa 720 pa Windows 10 kushandisa 7 zvakachengeteka mhinduro
Haugone kudzima VPN kubatana? Heano maitiro ekugadzirisa izvozvi
VPN inogona kuva shamwari yako yakavimbika kana zvasvika kune zvakavanzika zvepamhepo, asi dzimwe nguva kunyangwe maVPNs anogona kukonzera zvimwe zvinotsamwisa. Semuenzaniso, unogona kukuwana kwakaoma kubvisa ma profiles eVPN zvachose kubva pakombuta yako. Asi haufanirwe kunetseka; takakufukidza. Tarisa uone akanakisa maVPN aunogona kushandisa pakombuta yako. Ita shuwa yekushanyira yedu How-To Hub kuti uwane… [Verenga zvakawanda ...] nezve Haugone kudzima VPN kubatana? Heano maitiro ekugadzirisa nekukurumidza
Isa chigadzirwa chePPTP VPN Windows 10 kuti ubatanidze zviri kure nebasa, shandisa Remote Desktop kudzora PC kuburikidza neInternet, kana kushandura PC yako yekumba ive server yeVPN. Tsvaga kuti sei. Kunyangwe PPTP iine mashoma mashoma, senge hukuru hwekubatanidza kumhanya uye nerutsigiro rwekuzvarwa nemazhinji madhivhisi, zvinokuvadza zvinoita kuti ive isiriyo VPN protocol yekuchengetedza pamhepo uye kuvanzika Tsvaga… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekumisikidza PPTP VPN pa Windows 10 (Rizere Ruzivo)
Haugone kudzima VPN pane yako iPhone? Heano maitiro ekuzviita
Kuva neVPN pane yako iPhone parutivi kubva pane yauri kushandisa paPC yako kunogona kuita shanduko huru kune yako wega wega zvakavanzika. Nekudaro, sekune mamwe akawanda maapplication efoni, zvinhu zvinogona dzimwe nguva kubuda mukutonga. Semuenzaniso, unogona kuzviwana zvakaoma kudzima VPN, asi isu tiri pano kuzobatsira. Tarisa uone akanakisa maVPN eApple aunogona kushandisa. Shanyira yedu How-To Hub ku… [Verenga zvakawanda ...] nezve Haugone kudzima VPN pane yako iPhone? Heano maitiro ekuzviita